अठार वर्षदेखी पितृ बोलाउँदै सुन्तली – Sero Fero News
Mukti Neupane प्रकाशित मिती - २० चैत्र २०७३, आइतवार
मुक्तिप्रसाद न्याैपाने, पाल्पा
तपाईको परिवारमा मरेको व्यक्ति उसकै लय तथा आवाजमा बोल्छन् भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्ला ? नलाग्नु पनि स्वभाविकै हो ! तर एक पटक ‘सुन्तली दमिनी’ को मा पुगेपछि भने तपाईको भ्रम, भ्रममा सीमित हुन्छ । किनकी यहाँ पितृ बोल्छन् । सुन्तलीसँग पितृ बोलाउने कला छ । हुँगी–७ पाल्पाकी ‘सुन्तली दमिनी’ को वास्तविक नाम शान्ता परियार हो । तर उनलाई सुन्तली भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । उनी अठार वर्षदेखी पितृ बोलाएरै जीविका चालएकी छिन् ।
शनिबार बिहान झिसमिसे उज्यालोमा ‘सुन्तली दमिनी’ को मा पितृ बोलाउनेको भीड थियो । भीडमा धेरै युवा पनि थिए । युवा अवस्थामा गृहदशा, भाग्यरेखा र पितृ बोलाउने भन्ने धेरैलाई विश्वास लाग्दैन ।
त्यही भीडमा थिए रामपुर–१० पाल्पाका बिष्णु आचार्य । उनले आफु अरुको लहलहैमा लागेर पितृ बोलाउने भन्दै बिहान पाँच बजे हुँगी आएको बताए । उनी भन्छन्, ‘विश्वास नलागे पनि धेरैले मरेको व्यक्तिको अभिनयमै भूत, वर्तमान र भविष्य जानकारी हुन्छ भन्ने सुनेको थिए । हजुरबुबाले गरेका कार्यहरु र मृत्युपछिको उहाँको जीवनी पनि सुन्न पाएँ ।’ आचार्यसँगै आएका सोही स्थानका कक्षा १२ मा अध्ययनरत गोविन्द गौतम जीवनमा के गर्ने ? कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने जानकारी प्राप्त गर्दा खुसी भएको बताए । उनले यहाँ आएर सुन्तलीले भनेका सम्पूर्ण कुराहरु मिल्दोजुल्दो भएको बताउँछन् ।
मदनपोखरा–६ पाल्पाका बिष्णु भुसालले अकालमा मरेका पितृसँग उसकै अभिनयमा बोल्ने मौका पाएपछि पाँच पटक सुन्तलीकोमा हेराउनको लागि आएको बताए । ‘पहिलो पटक आउँदा सामान्य लागेको थियो । जति आउँदै गएँ आफ्ना मरिसकेका आफन्तजनको सम्झना बल्झिन लाग्यो । यहाँ आएर असेट मेटेको अनुभूति हुन्छ,’–भुसालले भने । उनले परिश्रम गर्दा पनि मेहनतको फल नपाएपछि निराश बनेकाहरुलाई पितृसँग बोलेर आफ्नो भविष्य जानकारी पाउँदा आशा भरिने गरेको अनुभव नागरिकलाई सुनाए । अपत्यारिलो तर वास्तविक आवाजमा वास्तविकता जानकारी पाइन्छ उनले भने । स्थानीय बिर्खकुमारी पछाईले धेरैले विश्वास गरेर हेराउनको लागी यहाँ भीड लागेको देख्ने गरेपछि आफुपनि पितृसँग बोल्न पालो पर्खेर बसेको बताईन् ।
यतिबेला सुन्तली दमिनीसँग पितृ बोलाउने मानिसको कुनै कमी छैन । धेरैले उनको मोबाईलमै फोन गरेर आफ्नो पालो (समय) लिने गर्छन् । यहाँ विभिन्न जिल्लाहरुसँगै भारतको दिल्ली, लखनउ, मद्रास, बम्बै र विहारबाट समेत मानिसहरु आउने गरेको बताईन् । मेरो पेशाकै कारण धेरै जात, धर्म, लिङ्ग, पेशा तथा समुदायका व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क स्थापित भएको छ । पितृमोक्ष कार्यकालागि पितृसँग बोल्न धेरै ठाउँबाट मानिसहरु आउने गर्दछन् । अठार वर्ष भयो, यहि पेशाबाटै मेरो जीविका चलेको छ । दुई छोरा र चार छोरीहरु सहितको परिवार धानिएको छ, उनले भनिन् । उनीले दैनिक ३० देखी ३५ जना व्यक्तिहरुको भूत, वर्तमान र भविष्य बताउने अनुभव सुनाईन् । अकालमा ज्यान गुमाउँनेहरुको मृतआत्मा आफ्नो शरिरमा अनुभव बताउन प्रकट हुने र सोही अनुसार आफुले बोल्ने गरेको शान्ता परियारले बताईन् । उनले बिहानै नुवाई धुवाई गरेर भगवानको आराधना गरि पितृ बोलाउने कार्यमा राती अबेरसम्म सक्रिय हुने गरेकि छिन् ।
पितृ बोलाउनको लागि कुनै विज्ञापन पनि गरेकि छैनन्, सुन्तलीले । उनीकहाँ एकपटक पुग्ने मानिसहरुले व्यक्तिगत सञ्चार गरेकै कारण उनलाई खोजीखोजी हेराउने मानिसहरु हुन्छन् । स्याङजा घर भएका युवाले नाम नबताउने सर्तमा आधुनिक समयमा पितृ बोलाउने र आफ्नो भविष्य खोज्ने व्यक्तिहरु यस्तो अन्धविश्वासलाई समेत चिर्न नसकिने अनुभव गरेको बताए । (२०७३ चैत २० गते प्रकाशित सामाग्री पूनः पाठककाे अनुराेधमा)